Vaovao - Inona ilay vera mazava be? Inona no maha samy hafa azy amin'ny vera tsotra?
Inona ilay vera mazava be? Inona no maha samy hafa azy amin'ny vera tsotra?
1. Ny toetran'ny vera mazava be
Ny vera tena mazava, antsoina koa hoe vera mangarahara avo sy vera ambany vy, dia karazana vera vy ambany mangarahara. Hatraiza ny haavon'ny fifindran'ny hazavany? Ny fandefasana hazavana amin'ny vera mazava tsara dia mety hahatratra 91,5%, ary manana ny toetran'ny haitraitra avo lenta sy ny famirapiratry ny kristaly. Noho izany dia antsoina hoe "Crystal Prince" ao amin'ny fianakaviana fitaratra izy, ary ny vera mazava-mazava dia manana toetra mekanika, ara-batana ary optika ambony, izay tsy azon'ny solomaso hafa. Mandritra izany fotoana izany, ny vera ultra-clear dia manana ny toetoetran'ny fanodinana vera avo indrindra. , Ka azo zahana toy ny vera mitsingevana hafa. Ity fahombiazan'ny vokatra ambony sy kalitao ity dia mahatonga ny vera fotsy fotsy dia manana habaka fampiharana malalaka sy vinavin-daharana mandroso.
2. Ny fampiasana vera mazava be
Any amin'ny firenena vahiny, ny vera mazava be dia be no ampiasaina ao amin'ny tranobe avo lenta, fanodinana vera avo lenta ary rindrina ambainy photovoltaic amin'ny masoandro, ary fanaka fitaratra avo lenta, vera haingon-trano, vokatra kristaly manahaka, vera jiro, elektronika marina ( kopia, scanner), tranobe manokana sns.
Any Sina, ny fampiharana vera mazava be dia be dia be, ary ny fampiharana amin'ny trano avo sy trano manokana dia nisokatra, toy ny Beijing National Grand Theatre, Beijing Botanical Garden, Shanghai Opera House, Shanghai Pudong Airport, Hong Kong Ivon-toeran'ny Convention and Exhibition, Nanjing Art Zatom-pirenena an-jatony ao anatin'izany ny afovoany no nanao vera mazava. Ny fanaka avo lenta sy ny jiro haingon-trano avo lenta koa dia nanomboka nampiasa vera mazava be tamin'ny habetsahana maro. Tamin'ny fampirantiana ny milina fanaka sy fanodinana natao tany Beijing, fanaka fitaratra maro no mampiasa vera mazava.
Amin'ny maha fitaovana substrate azy, ny vera mazava-mazava dia manome habaka fampivelarana midadasika kokoa ho an'ny fampandrosoana ny haitao angovo avy amin'ny masoandro miaraka amin'ny fandefasana hazavana avo tsy manam-paharoa. Ny fampiasana vera mazava be toy ny atin'ny rafitry ny fiovan'ny toetr'andro sy ny fotodrafitrasa amin'ny masoandro dia fahombiazan'ny teknolojia fampiasana angovo avy amin'ny masoandro eto an-tany, izay manatsara tokoa ny fahombiazan'ny fiovan'ny photoelectric. Manokana, ny fireneko dia nanomboka nanamboatra karazana tsipika famokarana rindrina kofehy solar photovoltaic vaovao, izay hampiasa vera mazava be dia be.
3. Ny tsy fitovizan'ny fitaratra mazava sy mazava amin'ny vera:
Ny mahasamihafa azy roa dia:
(1) Votoatin'ny vy samihafa
Ny maha samy hafa ny fitaratra mazava sy ny vera mazava tsara amin'ny mangarahara dia ny fahasamihafana betsaka amin'ny habetsahan'ny vy vy (Fe2O3). Ny atin'ny fitaratra fotsy tsotra dia betsaka kokoa, ary ny atin'ny vera mazava be dia kely kokoa.
(2) Hafa ny fandefasana hazavana
Satria tsy mitovy ny atin'ny vy, hafa ihany koa ny fandefasana hazavana.
Ny fandefasana hazavana amin'ny vera fotsy tsotra dia manodidina ny 86% na latsaka; Ny vera fotsy fotsy dia karazana vera vy ambany mangarahara, fantatra koa amin'ny vera vy ambany sy vera mangarahara avo. Ny fandefasana hazavana dia mety hahatratra 91,5% mahery.
(3) Hafa ny tahan'ny fipoahana tampoka amin'ny vera
Satria ny akora vera tena mazava dia mazàna tsy misy loto toy ny NiS, sy ny fifehezana tsara mandritra ny fiempoana ny akora, ny fitaratra tena mazava dia manana fitoviana mitovy kokoa noho ny vera tsotra ary vitsy ny loto anatiny, izay tena be mampihena ny mety ho tezitra. Ny vintana handravana tena.
(4) Tsy fitoviana loko samihafa
Satria ny atin'ny vy ao anaty akora dia 1/10 fotsiny na ambany noho ny an'ny vera tsotra aza, ny vera mazava be dia tsy mandray kely ao anaty tarika maitso misy hazavana hita maso noho ny fitaratra tsotra, miantoka ny tsy fitovian'ny loko fitaratra.
(5) Votoatiny teknika samihafa
Ny vera ultra-clear dia misy atiny teknolojia avo lenta, fifehezana famokarana sarotra, ary tombom-barotra matanjaka raha oharina amin'ny vera tsotra. Ny kalitao avo kokoa dia mamaritra ny vidiny lafo. Ny vidin'ny vera fotsy fotsy dia 1 ka hatramin'ny 2 heny noho ny vera tsotra, ary ny vidiny dia tsy ambony lavitra noho ny vera tsotra, fa ny sakana ara-teknika kosa somary avo ary manana sanda fanampiny fanampiny.